rashiphal Archives - Page2of3- Enepali Online
काठमाडौं उपत्यका सडकछेउ जताततै अव्यवस्थित पोल र लतारिएका नांगा बिजुलीका तार देखिन्छन्। जसले सहरी सौन्दर्य बिगारेको मात्रै छैन, सवारीसाधन लगायत अन्य गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटना समेत वृद्धि भइरहेका छन्। अब भने उपत्यकावासीले यस्ता समस्या भोग्नुनपर्ने भएको छ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस्तै समस्या समाधानका लागि नयाँ योजना अघि सारेको छ। प्राधिकरणले अघि सारेको योजना कार्यान्वयन भए अबको साढे दुई वर्षभित्रै उपत्यकामा जमिनमुनिबाट अर्थात् भूमिगत लाइनमार्फत उपभोक्ताको घर–घरमा बिजुली पुग्नेछ। प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग साझेदारी गरेर पहिलो चरणमा महाराजगन्ज…
"भर्खरै आयो काठमाडौँ बासीलाई यस्तो खुसीको खबर"
पुस २६, काठमाडौं । आज एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि थाइल्याण्ड उड्नुअघि ओली निवास बालकोटमा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासहित बसेको संयुक्त कार्यदलको बैठक सकिएको छ । बैठकमा ओली र प्रचण्डले कार्यदलले काम गर्ने कार्यविधि र कार्यदेशका बारेमा निर्देशन दिएका छन् । कार्यदलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार, प्रदेश सरकारको गठन, प्रदेशको मूख्यमन्त्री, सभामुख लगायतका विषयमा साझा धारणा बनाएर पार्टी एकता संयोजन समितिमा रिपोर्ट पेश गर्नेछ । रिपोर्ट तयार पार्दा दुवै दलले प्राप्त…
"भर्खरै सकियो ओली-प्रचण्डसहितको बालकोट बैठक, यस्तो दिए निर्देशन…"
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा.गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिले अहिले विवादको रूप लिएको छ । कसरी हेर्नुभएको छ ?न्यायपालिकालाई सबैतिरबाट विवादमा पारेका छन्। न्यायालयमा राजनीति घुसाउने प्रयास भइरहेको छ । न्यायालयमा कुनै पनि निर्णय संविधान र कानुनबमोजिम हुन्छ । राजनीतिक रूपले जस्तो चिच्याएर फैसला उल्टिँदैन। त्यसरी उल्ट्याउन पनि मिल्दैन। संविधान र कानुनबमोजिम नै सदर र बदर हुन्छ । हुल र भीडको दबाबका भरमा फैसला बदलिँदैन। यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ। फैसलामा चित्त नबुझे पुनरवलोकन गरिपाऊँ भन्न सकिन्छ। हुल, भीड…
"गोविन्द केसीविरुद्ध पूर्व न्यायाधीशले दिए यस्तो चकित बनाउने बयान"
Written by:Enepali OnlinePosted on: January 10, 2018 January 10, 2018
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको आदेशमा हिरासतमा नै वीर अस्पतालमा उपचारमा रहेका डा. गोविन्द केसीले सलाइनलगायत कुनै पनि औषधि लिन अस्वीकार गरेका छन्। अस्पतालको इएनटी वार्ड अन्तरगतको क्याबिनमा राति यो संवाददातासँगको छोटो भेटमा डा. केसीले भने, ‘म आत्तिएको छैन र कहिल्यै आत्तिन्न। म ठिक छु, त्यही भएर औषधि खानु पर्दैन।’ अस्पतालका मेडिसिन युनिटका प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठको ‘सुपरभिजनमा’ मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतबाटै सोझै अस्पताल पुर्‍याइएका डा. केसीलाई टाउको बेस्सरी दुख्ने, मुटुको धड्कन तिव्र हुने र मांशपेशी बाउँडिने…
"डा. केसीमा तीन समस्या, औषधि लिन अस्वीकार"
पुस २६, काठमाडौं । तपाईले सडक पेटीमा ठेलागाडामा राखिएका चटपटे र पानीपुरी खाने गर्नुभएको छ भने सावधान रहनुहोला । किनकी त्यसमा स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने खालका हानिकारक तेलको प्रयोग गरेको पाइएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।आजको कारोबारमा खबर छ-विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेलको नेतृत्वमा मंगलबार गएको बजार अनुगमन टोलीले चाबहिलस्थित धोविखोलानजिक एक कवाडी पसलबाट दूषित र हानिकारक तेल बिक्री गरेको फेला पारेको…
"पानीपुरी र चटपटे खाँदै हुनुहुन्छ ? सावधान रहनुहोस तपाइ मृत्युको मुखमा पुर्याउनसक्नुहुन्छ!"